Xildhibaanada Aqalka hoose ee gobolada Waqooyi oo heshiis laga gaaray | SAHAN ONLINE
Xildhibaanada Aqalka hoose ee gobolada Waqooyi oo heshiis laga gaaray
MUQDISHO – Guddiga Doorashooyinka dadban ee u qaabilsan gobolada Waqooyi(Somaliland) ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ay dhacayso doorashada 11-xildhibaan kuwaasoo kamid noqon doona Aqalka sare ee Soomaaliya.
Doorashadan ayaa ,waxaa dib u dhigay khilaaf muddo dheer soo jiitamayey kaasoo lagu ballamay in lagu xaliyo shirka madasha wadatashiga ee aan weli go’aamadu kasoo bixin.
Hoggaanka madasha wadatashiga Qaranka ayaa qodabkaas isla meel-dhigay ,waxaana loo gudbiyey Guddiga doorashooyinka ,iyadoona murankii jiray lagu xaliyey in 11-xubnood mid kamid ah la siiyo beelaha hartiga ee gobolada Waqooyi.iyadoona xubintaas la siiyey beesha Warsangeli sida ay sheegayaan warar ay heshay Sahan Online.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa horay qoraal uu saaray ugu daray liiska musharaxiinta Caasha Axmed Cabdalla walo kursigaas ahaa mid dhexyaala Xildhibaanada dirt Waqooyi iyo kuwa Hartiga.
Go’aankan ayaa dhigaya haddii uu sax yahay wararka ay helayso Sahan Online in aan lagu tartami karin beesha Harti lamase oga in kursiga la geyn doono Garoowe iyo doorashadiisu ka dhacayso magaalada Muqdisho.
Doorashadan ayaa qaadan karta muddo afar maalmood ah taasoo mar kale dib u dhigeysa jaywalk doorashada oo wararku sheegayaan in madasha hoggaanka qaranka ay wax ka bedeshay.